Posted on December 25, 2012 by Roopess	भिमेको ‘मितेरी’को कथा सुने/पढेपछि धेरैले भिमेलाई कुटिल माने। त्यति सानो उमेरमा भिमेले जसरी रविन्द्रेलाई चक्मा दियो, त्यो गजबकै थियो।
One response to “भिमे – २”	छुचो केटो (Suraj) (@Chhucho_Keto) says:	January 3, 2013 at 12:43 PM	म बुझ्दिन ठुला-ठुला कुराहरु त्यसैले पनि हुनुपर्छ मैले “भिमे” कथा अलि बुझिन । भाग-१ जसरि आयो त्यो भन्दा निकै गहन रूपमा भाग-२ आएको छ । अब तेस्रो भाग पनि आउनेछ भन्ने आशा छ तर आएन भने मैले गालि गर्नेछु रुपेश दाजुलाई कि मलाइ किन घोत्लिने बनायौ ? किन सोच्ने बनायौ तिम्रो कथाको पात्रको बारेमा ? भनेर । बाल्यकालको मितेरी अनि चकचके स्वभावलाई देखाउन खोजिएको कथाले समग्रमा सामाजिक पीडा र हुनेखाने र हुँदा खानेहरुको फरक खालको भोगाइलाई इंगीत गराउन खोजेको देखें मेरो हेराइमा । सायद, अलि हुनेखाने परिवारमा जन्मेको भए अहिले “भिमे” पनि “रूपेश” जस्तै ठुलो मान्छे बन्ने थियो । उसले पनि हामि आम युवाले जस्तै एउटा आफ्नै छुट्टै सपना पाल्ने थियो । तर बिचरा “भिमे” कहाँ होला ? के गर्दै होला ? बिभिन्न प्रश्नहरुको ओइरो लागेको मेरो दिमागमा पनि । अन्त्यमा, भाग-१ मा जसरि “भिमे” समाजको एउटा फटाहा पात्रको रूपमा आएको थियो, त्यसको बिपरित भाग-२ मा आएर सामन्ती संस्कारको बिरुद्धमा आवाज उठाउन खोज्ने एक इमान्दार युवाको रूपमा देखिएको छ फेरी एकपटक । कथाले निरन्तरता पाओस र भिमेको जीवनले लिएका हरेक मोडहरु पढ्न पाइयोस । रूपेश दाजुलाई शुभकामना ।।।